महिलामा सेवाको भावना धेरै हुन्छ ः रमला बराल (उपाध्यक्ष ने.नि.क.यु.सं.झापा) — Motivate News
महिलामा सेवाको भावना धेरै हुन्छ ः रमला बराल (उपाध्यक्ष ने.नि.क.यु.सं.झापा)
Posted on April 24, 2017 by motivate news
स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरु धेरै आकर्षित हुनुको कारण के हो ?
महिला भनेको मानवीय नाता, दयालु भावना र कोमल हृदयको खानी हो । प्रकृतिको स्वभाव अनुसार नै यस्तो भावना पुरुषको तुलनामा महिलामा अत्यधिक हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी चिजहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुका साथै महिलाहरु अरुको सेवा गर्न पाउँदा खुशी हुने झन् त्यसमाथि पनि रोगी बिमारीहरुको सेवा गर्दा सन्तुष्टि रहनुका साथैआफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी पुरा हुने भएकाले यसमा पुरुषका तुलनामा महिलाहरु बढी देखिएका हुन् ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिजति महिलाहरु कार्यरत छन् ? उनीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
यसमा धेरै महिलाहरु संलग्न रहेका छन् । ठ्याक्कै यति नै हो भनेर मलाई संख्या यकीन छैन । म कार्यरत रहेको झापा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने समग्र रुपमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ । काम गर्न सहज भइसकेको छैन । यहाँ साधन स्रोतको कमी छ । पर्याप्त रुपमा साधन स्रोतको उपलब्धता गर्न सकेको खण्डमा हामी हरेक चुनौतीसँग सामाना गरेर काम गर्न तयार छौं । हामीले यो पेशामा आउँदा नै जनताको सेवा गर्ने मनसाय लिएर आएका हौं । रोगी बिरामीहरुको उचित रेखदेख गरेर उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन हामी सधै क्रियाशील छौं ।
केही सरकारी कार्यालयहरुमा महिला हिंसा भएका घटनाहरु पनि मिडियामा आइरहेका छन् महिला भएकै कारणले तपाईमाथि पनि हिंसा भएको छ ? महिलाहरु पनि विविध स्वार्थलाई पूर्ति गराउन यस्तो तानाबाना बुन्छन् भन्ने आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ नि ?
छिटफुट रुपमा केही यस्ता घटनाहरु बाहिर आएका छन् तर प्रमाणसहित दोषी कर्मचारीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन भने कसैले सकेका छैनन् । हामी हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन । यदि कोही कर्मचारी महिला भएकै कारण ऊ माथि विभिन्न हिंसा भएका छन् भने खुलेर नै आउनुपर्छ ताकि यसबाट अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत सवक सिकाउन सकियोस् । म आफूलाई हरेका कुरामा पुरुषभन्दा कमजोर छु भन्ने नठान्ने महिला हुँ । ममाथि हिंसा प्रदर्शन गर्ने आँट कसैको हुन्न । जहाँसम्म महिलाहरुले स्वार्थ पूर्तिका लागि पनि यस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । कोही पनि महिला कर्मचारी आफ्नो इज्जतमा दाग लागेको हेर्न चाहन्नन् । यसमा अन्य केही तत्वहरुको षडयन्त्र हुन सक्छ ।
नेपालमा कर्मचारीहरुको लागि धेरै संगठनहरु छन् तपाई किन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) नै संलग्न हुनुभयो ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) भनेको नेपाली कांग्रेसको एक सुभेच्छुक कर्मचारी संगठन भएतापनि यसले मुख्य गरेर कर्मचारीहरुको पेशागत हक अधिकारको लागि काम गर्ने भएकाले मैले यस संगठनमा आवद्धता जनाएको हुँ । यो संगठन भनेको प्रजातन्त्रमा पूर्ण विश्वास राख्ने कर्मचारीहरु संलग्न हुने साझा चौतारी हो । यसका हरेक काम कारबाहीहरुमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र तटस्थता हुन्छ भने कर्मचारी साथहिरुलाई आइपरेको विविध समस्याको समाधानको लागि यस सम्बन्धित निकाय मार्फत निराकरण गर्ने भएकाले पनि मलाई नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राम्रो र भरपर्दो लागेको हो । यस संगठनले उठाएका सबै एजेण्डाहरु कर्मचारीमैत्री छन् । यसले कसैलाई पनि पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास पनि छ ।
महिलालाई अझैपनि आरक्षणको आवश्यकता छ ? यसले अन्य योग्यतममाथि अन्याय हुन्न ? महिलालाई आरक्षण कि सबलीकरण ?
यहाँको पितृसत्तात्मक संस्कारको कारणले महिलाहरु शिक्षामा पछि पारिएको कुरा त सबैलाई थाहा नै छ । शिक्षामा नै पहुँच कम भएपछि उनीहरुले अन्य सरह प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले महिलाहरुलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हो । यसले थोरै भएपनि राहत नै भएको मेरो बुझाइ छ । तर यसरी आरक्षणको नाममा महिलाहरुलाई खुम्च्याएर राख्ने प्रवृत्ति उचित होइन । अब महिलाहरु हरेक कुरामा सक्षम छन् । उनीहरु पुरुषभन्दा केही कुरामा पनि कम छैनन् । आरक्षण छ भनेर बस्नुभन्दा महिलाहरुलाई सशक्तीकरण र सबलीकरण गरेर प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने बनाउन राज्यले नै विशेष योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नु जरुरी छैन भन्ने मेरो धारणा छ ।
तपाई कार्यरत झापामा कति महिला कर्मचारीहरु छन् ?
झापा जिल्ला भनेको धेरै कुरामा अगाडि रहेको जिल्ला हो । अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ धेरै कुराको सुविधा पनि छ । २०७३÷७४ को तथ्यांक अनुसार लगभग सबै कर्मचारीहरुको अनुपातमा ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।
एक नम्बर प्रदेशमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को कस्तो नेतृत्व चयन भएको छ ? सबै संगठनहरुले महिलालाई देखाउने माध्यमको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ महिलाहरु कुनै जिल्लामा अध्यक्ष भए त ?
एक नम्बर प्रदेशमा रहेको १४ जिल्लाहरुमा एकदमै सक्षम् योग्य, जुझारु कर्मचारीहरु नै नेतृत्वमा आएका छन् । हाम्रो संगठनलाई कर्मचारीहरुका हरेक मुद्धामा अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्नेहरु नेतृत्वमा रहेका कारण हामी सबै कर्मचारीहरुको आस्थाको केन्द्र बन्न सफल भएका हौं । जहाँसम्म महिलाहरुलाई किन मूल नेतृत्वमा आउन दिइएन भन्ने सवालमा एक त अहिलेको हाम्रो समाज पुर्ण रुपमा महिलामैत्री भइसकेको छैन । महिलाहरुको योग्यता र नेतृत्व क्षमतालाई विश्वास गर्ने वातावरण अझै तयार भइसकेको छैन । तपाईले भनेको कुरा आंशिक रुपमा सही हो । मेरो संगठनमा यति र उति महिलाहरु संलग्न छन् भनेर अरुलाई सुनाउने त्यस कुरालाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्न असहज मान्ने प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न सकिएको छैन । एक नम्बर प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा महिला कर्मचारीहरु अध्यक्षमा चयन हुन सक्नुभएन । छोटकरीमा भन्ने हो भने समाजमा प्रचलित केही पुरानो सोच, महिलाहरुमा दृढ नेतृत्व इच्छाशक्तिको कमीको कारण सक्षम र सबल भएर पनि महिला कर्मचारीहरु मुल नेतृत्वमा आउन नसकेका हुन् ।
अब बन्ने निजामती ऐनमा महिलाहरुको के के कुरालाई समावेश गर्नुपर्ला ?
महिला कर्मचारीहरुलाई जागिरको साथसाथै घरपरिवार समेत हेर्नुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले उनीहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा घरपायकलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । उनीहरुले हाल प्राप्त गरेको सेवा सुविधा पनि प्रर्याप्त छैन । सुत्केरी बिदाको अवधि बढाउनुपर्छ । तालिम र विदेश भ्रमणहरुमा पनि महिला कर्मचारीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अन्तर प्रदेश सरुवा खुकुलो गरिनुपर्छ । श्रीमान र श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा छन् भने उनीहरुलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा खटाउनुपर्छ । यसमा लागि सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सहकार्य य्गरेर मात्र काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
महिलाहरुको मुद्धालाई उनीहरुले नै ध्यान दिँदैनन् भन्ने कुरा साँचो हो ?
तपाईको यो कुरामा मेरो सहमति छैन । हामी सबै महिलाहरु एकै हौं । घरब्यवहार समालेर सरकारी नोकरी गर्न सजिलो छैन । महिलाहरुलाई माथि जान पुरुषहरुको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ । हरेक महिला कर्मचारीहरुको आस्था विचार र सिद्धान्तहरु फरक हुन्छन् यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । फरक संगठनमा लागेको वा आस्था राखेको आधारमा पनि यस्तो लान्छनाहरु लाग्ने गरेको मेरो धारणा छ । यस्तै सबै पुरुष कर्मचारीहरुले पनि पुरुष कर्मचारीहरुलाई सहयोग त गरेको छैन नि के को महिलाहरुको मात्र ।
स्थानीय चुनावको रौनक सुरु भइसकेको छ ?
भ्mापा जिल्ला राजनीतिक रुपमा धेरै अगाडि रहेको ्िजल्ला भएको कुरा त तपाईलाई पनि अवगत नै छ । यहाँ संगठन भएका राजनीतिक दलहरुले मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई ब्यापक पारिसकेका छन् । राजनीतिप्रति सकारात्मक सोचको विकास भइरहेको छ । आफूले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु चुन्न पाइने भयो भन्ने आम सवैसाधारण जनतामा एक खालको उमंग देखिएको छ । हामी कर्मचारीहरु पनि निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर दिलोज्यानले खटेका छौं ।
कर्मचारीहरुको साझा संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन भएपछि दलहरुका संगठनको केही औचित्य छ र ?
नेपाल निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीहरुको हक अधिकारको लागि सरकारसँग सामुहिक सौदावाजी गर्ने काम भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको हो । कर्मचारीहरु पनि यही समाजका मान्छे हुन् । उनीहरुको पनि केही आस्था त हुन्छ नै त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले सोच्नु हुँदैन । मुख्य कुरा हामीले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवामा कमी हुन नदिने हो । अन्य समयमा आफूलाई मन परेको दललाई समर्थन गर्न पाइन्छ । पेशागत हितको खातिर एकजुट हुन त लोकतन्त्रमा सबैलाई छुट हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन पनि यी फरक, फरक संगठनहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ ।
अब हुने सातौं महाधिवेशनबाट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को कस्तो केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा छ ?
मेरो र तेरो नभनी सबै कर्मचारी साथीहरुलाई समेटेर लान सक्ने सक्षम, योग्य जुझारु र गतिशील नेतृत्व आएमा मात्र हाम्रो संगठनलाई एक नम्बरको बनाउन सकिन्छ । आगामी समयमा हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा हाम्रो संगठनलाई पहिलो बनाउने कठिन दायित्व पनि हामीसामु छ । सारमा भन्दा संगठनको हितलाई सर्बोपरि ठानेर काम गर्ने नेतृत्व हामीलाई खाँचो छ । यस कुरामा हामी सबैले विवेक पु¥याउनुपर्छ । उम्मेदवार भएपछि उसले गरेको प्रतिवद्धता पत्रको आधारमा हेर्नुपर्छ । भाषण होइन काम गरेर परिणाम देखाउन सक्ने ब्यक्तिको आवश्यकता छ ।
अन्त्यमा केही थप कुरा छन् ?
आजको समय भनेको सबैलाई समान अवसर भएको समय हो । महिला भएकै आधारमा उनीहरुमाथि कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नुहुन्न । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनैपर्छ । हामी कर्मचारीहरुले पनि आफू संलग्न संगठनहरुमा यस्ता विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्व लिन र खोजिम मोल्नसक्ने हुनुपर्छ । मेरो विचारलाई सबै साथीहरुको माझमा पु¥याउन सहयोग गरेकोमा तपाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, समाचार | Leaveareply